The Ab Presents Nepal » खुसिको खबर! लिपुलेकसहित २० सीमा क्षेत्रमा यो वर्ष शसस्त्रको पोस्ट स्थापना हुने
खुसिको खबर! लिपुलेकसहित २० सीमा क्षेत्रमा यो वर्ष शसस्त्रको पोस्ट स्थापना हुने
काठमाडौं,कात्तिक २४- भारत, चीन र नेपालबीचको त्रिदेशीय सीमा लिपुलेकसहित २० सीमा क्षेत्रमा यो वर्ष बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) स्थापना हुने भएको छ । सीमा सुरक्षालाई थप बलियो बनाउन गृह मन्त्रालयले बिओपी थप्न लागेको छ । चीनसँगको सीमामा चार बिओपी स्थापना हुनेछन् ।
दार्चुलाको लिपुलेक, हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको लोमान्थाङ र संखुवासभाको किमाथांकामा सशस्त्र प्रहरीले बिओपी स्थापना गर्नेछ । भौगोलिक रूपमा निकै कठिन भएकाले विस्तृत तयारी गरेर चार नाकामा बिओपी स्थापना गर्न लागिएको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी सुरजकुमार श्रेष्ठले बताए ।
लिपुलेकमा बिओपी स्थापना गर्नुलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । दुई वर्षअघि भारत र चीनले नेपालको जानकारीविनै नेपालको भू–भाग पर्ने लिपुलेकमा ट्रान्जिट बनाउने सम्झौता गरेका थिए । सो क्षेत्रमा भारत र चीन दुवै देशले नेपालको सीमा मिचेको रिपोर्ट गृह मन्त्रालयमा आएको छ । चीनसँगका अन्य नाकामा पनि आपराधिक घटना बढेपछि प्रहरीको उपस्थिति बढाउन लागिएको हो । ‘यस वर्ष २० देखि २५ वटा बिओपी थप्ने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने,थप बिओपी भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा स्थापना हुनेछन् ।
गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सशस्त्रले सीमामा २० बिओपी थपेर ८७ बाट एक सय सातवटा पुर्‍याएको छ । नेपाल र भारतीबीच एक हजार सात सय ५१ किलोमिटर लामो सीमा छ । जहाँ भारतको सशस्त्र सीमा बलको पाँच सय ११ बोर्डर पोस्ट छन् ।